Arsenal Oo Manchester United Iyo Tottenham Hotspur Kula Tartameysa Saxiixa Ross Barkley » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/Arsenal Oo Manchester United Iyo Tottenham Hotspur Kula Tartameysa Saxiixa Ross Barkley
Naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa qorsheeneysaa lasoo saxiixashada xidiga kooxda Everton Ross Barkley, marka uu dib u furmo suuqa soo aadan ee ciyaaryahanada, si ay kaga baxdo dhibaatada xoogan ee ka heysata dhanka khadka dhexe.
23 -jirkan ayaa wuxuu xili ciyaareedkan waqti wanaagsan ku qaadanayaa kooxdiisa reer England ee Everton, taasoo ka dhigtay in saxiixiisa ay si weyn u doonaan kooxo farabadan ee kaga ciyaara horyaalka Premier League oo ay ka mid yihiin Manchester United iyo Tottenham Hotspur.
Wargeyska “Daily Mirror” ayaa shaaca ka qaaday in kooxda reer London ee Arsenal ay qeyb ka soo noqotay kooxaha doonaya saxiixa Ross Barkley, si ay ugu xaliso dhaawacyada isdaba jooga ah ee soo gaadhaya xidigaha kala ah Santi Cazorla iyo Ramsey.
Wararka ayaa sidoo kale intaa ku sii daraya in maamulka kooxda Everton ay go’aansadeen iibinta Ross Barkley, xili ciyaareedka soo aadan hadii uu go’aansado inuusan wax heshiis ah u saxiixiin kooxdiisa Everton, taasoo ilaa iyo haatan uusan sameyn.
Sikasta Kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Gunners ayaa waxay dooneysaa in dhigeeda Everton ay culeyska ku saarto sida ay heshiis cusub kaga saxiixan 23 jirkan, isla markaana xili ciyaareedka soo aadan uu u soo dhaqaaqo Emirates Stadium.